Mucaaradkii Xassan Sheekh oo ka shallaayay taageeridda Farmaajo (Xog culus)
Home » WARARKA MAANTA » Mucaaradkii Xassan Sheekh oo ka shallaayay taageeridda Farmaajo (Xog culus)	Mucaaradkii Xassan Sheekh oo ka shallaayay taageeridda Farmaajo (Xog culus)
20/03/2017	5,156 Views Madaxweynaha Soomaaliya mudane- Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wixii ka dambeeyay markii uu si toos ah ula wareegay kursiga madaxtinimada, waxa uu luminyay taageerada iyo kalsoonida dad badan oo doorashadiisii aad ugu farxay.
Taageeradii ballaarnayd ee ay shacabka Soomaaliyeed ku soo dhaweeyeen doorashadii madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ay sababtay in siyaasiyiinta iyo cid kasta oo mucaarad ku noqon lahayd madaxweynaha ay iska aamusaan, iyaga oo u hoggaansamaya rabitaanka shacabka.
Hase ahaatee, habdhaqanka uu la yimid madaxweynaha markii uu xilka la wareegay ka dib, ayaa waxa uu dad badan tusay weji aan ahayn midkii ay ka filayeen mudane- Farmaajo. Waxaana billowday in dhaliillo loo jeediyo hoggaamintiisa, oo si kasta oo ay u cusub tahay haddana la arkayo in aanay u jiheysnayn dhabbihii laga filayay.
Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan saluugga laga qabo mudane- Farmaajo ayaa waxa ay sheegayaan in siyaasiyiin hore u taageertay madaxweynaha cusub, oo gacan-ka-geysatay guushiisa, ay hadda dib uga gurteen; ka dib markii ay ka xumaadeen hab-dhaqan aan laga filayn oo uu madaxweynuhu la yimid.
Musharraxiintii madaxtinimada Soomaaliya, ee loo yaqiinnay (Isbeddel-doonka), ayaa waxa ay hadda saluugsan yihiin madaxweyne Farmaajo oo markii hore ay ka wada midaysnaayeen aragtida isbeddel-doonnimada.
Madaxweynaha ayaa -doorashadiisa ka dib- waxa uu la kulmay musharraxiintii ay iska kaashadeen in doorashada looga adkaado madaxweynihii hore mudane- Xassan Sheekh. Kulankaasna waxa uu mudane- Farmaajo musharraxiinta ugu ballan-qaaday in uusan albaabada ka xiran doonin, si ay ula wadaagaan talooyinkooda.
Dad xog-ogaal ah ayaa tilmaamay in madaxweynaha iyo musharraxiintii kale ee isbeddel-doonka loo yaqiinnay ay si hoose ugu ballameen in musharraxiinta qaarkood laga qeybgeliyo dowladda, gaar ahaanna xukuumadda la soo dhisayo.
Hase ahaatee, ballanqaadyadii xilalka ee musharraxiinta loo sameeyay ayaa noqday kuwo beenoobay, waxaana taas ka sii daran in uu madaxweynuhu albaabka ka xirtay musharraxiinta oo uu xitaa u diiday in ay xafiiskiisa soo gaaraan.
Arrintan ayaa waxa ay madaxweyne Farmaajo ka dhigaysaa mid ku sifoobay dhaliilihii uu u soo jeedin jiray madaxweynihii isaga ka horreeyay, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in uu madaxweynuhu talada dalka ku koobay koox yar, inta kalena uu albaabada ka xirtay.
Dad badan, oo mucaarad ku ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane- Xasan Sheekh, ayaa waxa ay madaxweyne Farmaajo oo muddo kooban xilka haaya ku arkayaan dhaqamo la mid ah kuwii ay ku mucaaradi jireen madaxweynihii isaga ka horreeya. Qaar dadkaas ka mid ahna waxa ay durba billaabeen in ay ka shallaayaan taageeradii ay u muujiyeen Farmaajo oo ay moodayeen in uu wax ka beddeli doono wixii ay Xasan ku mucaaradsanaayeen.
Previous: Buntilan oo markii ugu horreysay saluugtay dowladda Farmaajo
Next: Xiriirka Galmudug iyo Buntilan oo meel fiican maraya (akhriso warbixin xiiso leh)